Daraasad: Boqolkiiba 60% dadka lagu xukumay kufsiga ee Sweden asalkooda Waa soogalooti Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaDaraasad: Boqolkiiba 60% dadka lagu xukumay kufsiga ee Sweden asalkooda Waa soogalooti
Daraasad: Boqolkiiba 60% dadka lagu xukumay kufsiga ee Sweden asalkooda Waa soogalooti
Daraasad ay sameysay jaamacada iswiidhishka ee Lund ayaa muujisay in kiisaska kufsiga ee Sweden ay aad u kordheen, korna ay u kaceen 44% sanadkii la soo dhaafay ee 2020 ilaa 8,820 dambi oo kufsi ama isku day kufsi ah ayaa dhacay
Daraasaddan oo lagu daabacay wargeyska Expressen , ayaa muujisay in 60% dambiyadaas ay geysteen dad asalkoodu yahay soo galooti.
Daraasadda waxaa ku jiray 3000 oo dambiilayaal ah, si loo ogaado astaamaha guud ee ka dhexeeya, sidaa darteedna 1,800 oo ka mid ahi ay ka yimaadeen jiilka koowaad iyo labaad ee soo galootiga ah ee Iswidhan.
Daraasadda ayaa sidoo kale muujisay in kala bar dadka lagu xukumay dambiyada rabshadaha ka hor inta aan lagu xukumin kufsi.
Waxay sharaxaad ka bixisay in dambiilayaasha ugu badan ee asalkoodu yahay soo galootiga ay yihiin kuwa dhashay bartamihii todobaatameeyadii oo aan dhamaysan waxbarashadoodii, maaddaama ay yihiin dad dakhligoodu hooseeyo kuna nool aagagga lagu tilmaamo inay yihiin dad faquuq ah ama nugul.
Waxay xustay in qaar badan oo iyaga ka mid ah ay galeen dambiga hore ugu yaraan dambiyada xatooyada iyo ka ganacsiga daroogada iyo dambiyada rabshadaha kala duwan.
Daraasadu waxay sii waday in 34.5% dadka la xukumay ay ka yimaadeen wadamada Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, in ka badan 19% waxay ka yimaadeen wadamada kale ee Afrika, iyo 15% Bariga Yurub.